Tsidika · Jolay, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Tsidika · Jolay, 2017
Tantara mikasika ny Tsidika tamin'ny Jolay, 2017
Moldova: “Taokanto An-drindrina” sy Sary Hafa
Eoropa Afovoany & Atsinanana 28 Jolay 2017
Ato anatin'ity angon-tsary ity no ahitàna bebe kokoa amin'ireo sarin'ny dia tany Moldova (254) nopihan'i dittaeva.
Israely 27 Jolay 2017
Rosia: Moskoa, Dimampolo Taona Lasa Izay
Nahita raki-tsary tsy fahita firy tao anatin'ny fakon'i Moskoa - Im Flug nach Moskau, avy amin'i Erich Einhorn, ARTIA, 1959 ilay mpisera LJ, fool_4_lifetime- ary ni-scan azy ireo sy nandefa ireo sarin'i Moskoa miisa 60 tao amin'ny fiarahamonina LJ moya_moskva (Moskoako).
Trano iray, tontolo roa...ary tanàna niova anarana matetika
Hongria: Ny Paprika Ao Szentes
Eoropa Afovoany & Atsinanana 26 Jolay 2017
Hitako ity toerana ity omaly. Moa ve ny tompon'ity trano ity tena tia fatratra ny Paprika ? Sa fomba iray hahazoana vola fanampiny? Na inona na inona antony, ny zavatra azo antoka dia ny hoe, hiafara ho "zava-manitra" an-dakozia maro ao Szentes ireo paprika natao girilandy tsara tarehy (paprikafuzer) ireo.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 24 Jolay 2017
Libanona: Lohataona, Zavakanto sy Zava-manahirana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Jolay 2017
Ao Libanona, manomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 21 Martsa ny lohataona. Izany no mahatonga ny 21 Martsa ankalazaina ho toy ny Andron'ny Reny ao.